Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » COVID-19 Spike na-eyi mgbake njem njem UK
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Site na mmachibido na -agbanwe agbanwe maka njem mba ofesi, ezumike ụlọ dị ka nzọ dị nchebe n'oge na -adịghị anya.
Emebere ezumike ụlọ ga -abụ nke kacha ewu ewu na UK n'ọnwa 12 na -abịanụ.
Nnukwu mmụba n'ofe UK nwere ike belata ntụkwasị obi ụfọdụ ndị njem.
Azụmaahịa njem na -akwadebe maka oge ọkọchị na -arụ ọrụ nwere ike nweta oke ọrịa ma ọ bụ yigharị oge.
N'agbanyeghị arịrịọ ọnụnọ na UK ịdị ike, ịrị elu nke ọrịa COVID-19 yana ihe chọrọ ịnọrọ onwe ya ma ọ bụrụ na 'pinged' nwere ike ibute atụmatụ oge ọkọchị, yana ndị na-ahụ maka njem nwere ike hapụ ego ha chọrọ n'oge ọkọchị a.
Mgbapụta ikpe COVID-19 nwere ike itinye mgbake njem ụlọ UK na oge ọkọchị a
Dika ntuli aka emere n'oge na -adịbeghị anya, a na -atụ anya ezumike ụlọ ka ọ bụrụ nke kachasị ewu ewu na ọnwa iri na abụọ na -abịanụ, ebe 12% nke ndị na -aza UK na -ahọrọ ụdị njem a, nke dị ala karịa 30% nke ndị zara ụwa niile na -ahọrọ njem ụlọ. Site na mmachibido na -agbanwe agbanwe maka njem mba ofesi, ezumike ụlọ dị ka nzọ dị nchebe n'oge na -adịghị anya.
N'agbanyeghị oke mkpa, nnukwu mmụba n'ofe n'ofe UK nwere ike belata ntụkwasị obi nke ndị njem. N'ọnọdụ ndị na -arị elu, o yikarịrị ka ndị njem ga -eji nlezianya kpachara anya maka njem njem ọkọchị. Azụmaahịa njem na -akwado maka oge ọkọchị na -ekwo ekwo nwere ike ị nweta oke ọrịa ma ọ bụ yigharị oge ka ụfọdụ na -ezere mpaghara njem nlegharị anya ka ikpe na -ebili, n'agbanyeghị mmachi na -ebelata.
'Pingdemic' ahụ etoola UK nke ukwuu, ebe mmadụ 618,903 na-anata ọkwa ka ha kewapụ onwe ha n'oge dị n'etiti Julaị 8 na 14. Nke a bụ ịrị elu 17% site n'izu gara aga.
Site na ọnụ ọgụgụ ndekọ aha ya, njem nwere ike nwee ọgba aghara n'oge ọkọchị a. Oge ịnọpụ iche dị na kaadị maka ndị ahụ pinged, na ịmachibido ichepụ ụlọ ga -emetụta ntinye akwụkwọ ezumike. Pinged ndị nwere akwụkwọ ntinye aka ga -akagbu n'ihi na ha enweghị ike ịga njem ọzọ. N'ọnọdụ ndị na -abawanye n'ihi mgbanwe dị ukwuu nke Delta na a na -enyekwa ndụmọdụ ka ha kewapụ onwe ha, ọ dị ka njem atọrọ maka oge jọrọ njọ. N'agbanyeghị mmachi na -ebelata na olileanya maka mmaliteghachi n'oge ọkọchị dị elu, 'pingdemic' nwere ikike igbochi njem ma gbochie mgbake ụlọ UK.
Iji kwado ntinye akwụkwọ, ọtụtụ ndị ọrụ webatara amụma nkwụghachi mmesapụ aka ma nwee ike na -eche atụmanya nke ịkwụghachi ndị njem ma ọ bụrụ na ikpe ebilite, na -emetụta ntinye akwụkwọ njem.
Atumatu nkwụghachi ụgwọ na-adọrọ mmasị emeela ka ahịa ahịa maka ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ, agbanyeghị, ịrị elu nke ikpe COVID-19 nwere ike ịmalite imetụta ego onye ọrụ na-enweta. Mmefu ego nwere ike kpọnwụọ maka ndị na -arụ ọrụ nwere nnukwu ọrịa kansa, ego nwere ike ịda, na mgba ego nwere ike ịga n'ihu.
mario ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 6, 2021 na 19:42
Ịtali nọ n'otu ụgbọ mmiri!